Android 11 waxay xaddideysaa marin u helka internetka howlaha qaarkood ee barnaamijka | Androidsis
Shaki la'aan soo jeedin xiiso leh oo ay soo saartay Android 11 oo loogu talagalay amniga iyo daadinta xogta. Marka waxaan ka hadlaynaa waxa marin u helka shabakada ama internetka waxay ku xadidnaan doontaa howlaha barnaamijyada qaarkood.
Waa mid kale oo ka mid ah Android 11 news mid ka mid ah daabacaadkeedii ugu dambeeyay ka hor intaanu soo gaadhin nooca ugu dambeeya. Xaqiiqdii shalay waxaan baranay sida xirashada muraayadaha indhaha oo isku mar ah inaad sawirro ka qaaddo ama duubto.
Marka waxaan ka hadlaynaa barnaamijyada ayaa damaanad qaadi kara marin u helka internetka ee howlaha qaar ee ku shaqeeya asalka barnaamijyadiinna. Soo-gaadhista xogteenna waa la dhimi lahaa haddii barnaamijku cillad leeyahay oo mid ka mid ah hababkaas ay xogta soo geliyaan.
Sidan suurtagalnimadaas waa la tirtiray oo kaliya gelinta xogta ayaa loo oggol yahay in lagu soo rogo nidaam, xaddidaadda soo-gaadhista xog xasaasi ah oo barnaamij kasta marti gelin karo; runtiina way jiraan kuwa badan oo aan sida caadiga ah ku haysanno dukumiintiyo, sawirro cad ama waxyaabo xasaasi u ah xatooyo suurtagal ah.
Como sifiican ayaynu u ognahay in barnaamijyadu ay leeyihiin ciladoMarar badan xitaa ma naqaano natiijada cayayaankaan taas darteedna waxay noqdeen god daloola oo xogteenna la soo bandhigo. Dabcan kama hadlayno sifooyinkaas u muuqda inay soo jiitaan fiiro badan oo ka imanaya nidaamka hawlgalka sida Android, laakiin waxay la xiriiraan amniga mobiladayada, waa wax ka badan soo dhaweyn.
Hadda waxay u hartay oo keliya horumariyeyaasha inay qarash gareeyaan xiriirkan waayo, ogow muuqaalka oo cusbooneysiin kara barnaamijyadooda iyada oo horumarkan weyn lagu sameeyay sidaa darteedna in howlaha qaarkood ay yihiin kuwa kaliya ee marin u leh internetka gelinta ama soo dejinta xogta internetka. Inta soo hartay, waa cabir amni oo ka dhigaya nidaamkeena hawlgalka mobilada mid nabdoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Android 11 ayaa u oggolaan doonta xannibaadda marin u helka shabakadda marka laga reebo barnaamijka loogu talagalay amniga weyn
Sida loo kiciyo Google Docs Dark Mode on Android